Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ရခဲ့တဲ့ ဆု စူးခဲ့တဲ့ စိတ် ဒဏ်ရာ
Writer Sein Lyan Time 2:28 am
27 July 2009 at 02:39
ဆရာမကလဲ စေတနာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် တချိန်လုံး ချိုးနှိမ်ခံနေရရင်တော့ ကလေးဆိုတာ အစွဲရှိမှာပါပဲ၊ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးပါတယ်
မြန်မာစာ ၈၂ မှတ်တဲ့။ တော်လိုက်တာ.. အဲ့ဒီအမှတ်မျိုး ၄တန်းလောက်ထိပဲ ရဖူးမယ်ထင်တယ်
အကိုရေ ကောမန့်တွေ လိုက်မရေးတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အကို့ဆီတော့ ၀င်ရေးသွားပါတယ်။ ဘ၀မှာ ဒီလိုဆရာမမျိုးတွေလဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိသွားရပါတယ်။ ကျနော်အမြင်တခုထဲဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး လုပ်ရပ်ကို ဆရာမတယောက်အနေနဲ့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တပည့်ကို ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းမွန်အောင် ပြောပြော အမြင်လှတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ။ အားတက်စေမဲ့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ပြောသင့်ပါတယ်။ ခုဟာက အကိုက ကြိုးစားလို့ ဒီလိုဘ၀မျိုးကို ရောက်လာတာပါ။ တကယ်၍များ အဲ့လို ဆရာမက ပြောလို့ စိတ်ဓါတ်ကျသွားတဲ့ လူတယောက်အဖြစ်ကို တွေးကြည့်မိရင် ရင်လေးစရာပါပဲ။ ကျနော်တို့တွေ ပြုပြင်သင့်တာတွေ များနေတယ် အကိုရေ
27 July 2009 at 03:34
27 July 2009 at 03:41
ဆူး ဆိုတာကတော့ စူးပီးရင် ဒဏ်ရာ ကျန်ခဲ့တတ်တာပါပဲလေ။
ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာက ခုလို အနာရွတ်မထင်ပဲ ပြေပျောက်နိုင်ခဲ့တာ ကျေနပ်စရာ၊ နောက်ပီး မခံချင်စိတ်က ကောင်းသော လမ်းကို တွန်းပို့ခဲ့တာကလဲ ကျေနပ်စရာပဲပေါ့။
ဒဏ်ရာရစေတတ်တဲ့ ဆူးတွေ ညီ့ဘ၀မှာ ထပ် မကြုံရစေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဆူး စူးခဲ့သည် ရှိအုံးတောင် အဆိပ်တက်စေတဲ့ ဆူး၊ အမာရွတ်ထင်ကျန်စေမဲ့ ဆူးတွေကနေ ကင်းဝေးပါစေဗျာ။
27 July 2009 at 03:52
"ကိုမောင်ဟတ်" မဟုတ်။ "ကိုမောင်ဟန်" ပါ။ မွှားရိုက်မိလို့ပါ။ အဟီးးးးးးးးးး
ကိုယ့်နာမည် ကိုယ် ဖျက်မိပါဘီ
27 July 2009 at 03:55
ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ ကိုဖိုးစိန်..နောက်တစ်ခုက မြန်မာစာကို အမှတ်များတဲ့ သူတွေကို အရမ်းလေးစားမိတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အမှတ်မများခဲ့လို့ရော..အမှတ်များဖို့ ခက်လွန်းတာရယ်ကြောင့်ရောပေါ့... Congradulation ကိုဖိုးစိန်
တစ်ခါတစ်လေ. ကိုယ်လဲ ခလေးတွေ ကိုပြောမိတယ်။ နဲနဲပေါ့။ ပိုဆင်ခြင်မိမယ်။ ကျေးဇူး။
27 July 2009 at 04:33
27 July 2009 at 04:34
တော်လိုက်တဲ့ခလေး။ ၈၂ မှတ်တဲ့
ဘယ်လို များ ရှိုးထုတ်ပြီး ဆုသွားယူပါလိမ့်...လိမ့်...
ဖစ်ရမယ်.. ဖစ်ရမယ် :D
တို့ကတော့ ၇၂မှတ်ပဲရခဲ့တယ်ကွယ့် :D
အမ်မလေး ကိုဖိုးစိန်ရယ်။ဘာလို့ အစောကြီးရေးတာလဲ။
အကြွေးထူတွေ များကြီးကျန်သေးဆိုပြိး အေးဆေးနှပ်နေတာ။
မြန်မာစာကို ဂုဏ်ထူးထွက်အောင် ဖြေနိုင်တယ် ဆိုတာ နည်းတဲ့ အရည်အချင်းမဟုတ်ဘူး။
27 July 2009 at 06:04
phoe sein yal.. read yin myat yay tg wae` tal..
a ma lae myanmar sar gon htoo koayan lo chin kae tar.. myanmar sar gon htoo ya ter ko laeayan gon u ter.ayan taw par tal..e`dtone ka.. 1st MM gon htoo su pay pwal ko Sa yar U Thein Ng ka People's Park mhar khan khan nar nae ko lote kae ter.ama sis ka ya tot tat kae bu tal.. kyain kyay twar ter lar ma thi par wo.. sat sa lu hta p.. ta pote lone koamay ta char..ans : ta char lote kae tal lay.. !_!. BTW ,dmhar UFL .frech ka techer ta yoke yoke nay tal.. teacher be` lote nay tal..
မြန်မာစာ 82 မှတ်ဆိုလို့ တော်တော် လေးစားသွားပြီ...။
27 July 2009 at 07:07
အရေးအသားနဲ့ အကြောင်းအရာကိုတော်တော် သဘောကျမိပါတယ်
ကျောင်းသားတွေ အဓိက ထိတွေ့နေရတဲ့ ဆရာတွေဟာ ကျောင်းသားတွေ အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဆရာတွေ သိထားသင့်တယ်
မြန်မာစာ ၈၂ မှတ်တဲ့ တော်လိုက်တာ…ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကများ သူတပါးအားကျလောက်စရာ အမှတ်ကိုရစေခဲ့ပါလိမ့်….
အောင်မြင်သူများဖြတ်သန်းခဲ့ရသော လမ်းသည် ပန်းခင်းလမ်းဖြစ်မနေတတ်ပါ….
အပြစ်ရှာ အပြစ်တွေ…အချစ်ရှာ အချစ်တွေ့တတ်သောလောကတွင်…စဉ်းစားဥာဏ် နုနယ်သေးသော လူငယ်များအား Misleading ဖြစ်စေသောဆောင်းပါများကို…စာရေးဆရာ ဖြစ်သည့်အခါ ထိန်းသိမ်း၍ရေး နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်လျှက်…
ဂုဏ်ထူး ဖိုးစိန် .... နာမယ်နောက်တမျိုး ထပ်တိုးသွားပြီ ။
မြန်မာစာ ကို ဂုဏ်ထူးထွက်တယ် ဆို တာ နဲတဲ့ အရည်အချင်း မဟုတ်ဖူးနော် ။ ချီးမွှန်းပါ၏ ။။ အဲ ။ ချီးမွမ်းမိပါ၏ ။
ဆရာမ ကလည်း ဆန်ရင်းမို့နာနာ ဖွပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်မှာပါ ။ တခုမေးရအုံးမယ် ။
အဲဒီ ထမင်းစားလက်မှတ်ရော ။။ ကျန်နေသေးလား ။
အိပ်စ်ပိုင်ရာ .. မဖြစ်သေးရင် ခဏ ငှားချင်လို့
ဒီက ထမင်းတွေ စားလို့ ရမလားသိဖူး ။ စမ်းသုံးကြည့်ချင်လို့ ဟေးဟေး ။။
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုစိန်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ၁၀ တန်းတုန်းက ဆရာမက ပညာတတ်ဖြစ်မယ့် ကောင်မဟုတ်ဘူး။ နင်ကြီးလာရင်ဘာလုပ်စား မှာလဲလို့မေးတော့ အင်ဂျင်နီယာ လုပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ အေးဖြစ်ရင်လာပြော ငါမြန်မာ နိုင်ငံမှာမနေဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာ။ အခုတော့ ကျွန်တော့် ဆရာမကို သနားလို့သွားမပြော တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဆိုးတာကိုနော် ပြောမှာပေါ့လေ။ အခုတော့ ဆရာမတွေကို လွမ်းတယ်ဗျာ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ Post လေးပဲ ဖိုးစိန်ရေ...
မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာမကို မုန်းတီးစိတ်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ဆရာဆိုတာ ကလေးက ပိုတော် ပိုထူးချွန်စေချင်လို့ စိတ်ဓာတ်တွေပဲရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမုန်းခံ ပြီးမှ ကလေးတစ်ယောက်ကို ထူးချွန်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဆရာမကို လေးစားတယ်။
သူငယ်ချင်းရဲ့ သားကို မနိုင်တော့တဲ့အဖေ၊ ကိုယ့်သားကို မထိန်းနိုင်တော့မှာ စိုးတဲ့အတွက်
ပူပင်နေရတဲ့ အဖေကို ကိုယ်ချင်းစာ တတ်တဲ့ ဆရာမ၊ သူငယ်ချင်းရဲ့ သားမို့လို့ သားဆိုးသားမိုက် ဘ၀မျိုး
မဖြစ်သွားရလေအောင် အမုန်းခံပေးပြီး ရင်ထဲက မပါတဲ့ စကားနဲ့ ကလေးကို မခံချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်လို့ မြင်မိတယ်။
ဆရာဆိုတာ မိဘနှင့်တဂိုဏ်းထဲပါ။ အဲဒီတုန်းက ပေကပ်ကပ် ဂျစ်ကန်ကန် တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ဆရာရဲ့ ရိုက်နှုက်ဆုံးမနိုင်တဲ့ အခွင့်အာဏာကိုတောင် မရိုက်ဖို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားကို အဲဒီအချိန်တုန်းကသာ ဆရာမက သာဒီလို မထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ဘူး မကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုလျှင်.......
ဘာပဲပြောပြောလေ...အဲဒီတုန်းက မြန်မာစာဂုဏ်ထူးရတာ ကိုသိသွားတဲ့ မြန်မာစာဆရာမတစ်ယောက်ကို ဆရာ့ဂုဏ်ကို မျက်စိထဲ လှမ်းမြင်မိတယ်။ စိတ်မကောင်းလဲ ဖြစ်မိတယ်။
မြန်မာစာကို ၈၂မှတ်နဲ့ ဂုဏ်ထူးရသွားတဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကိုလဲ လေးစားပါတယ်။ ပြီးတော့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးရှိတာကိုလဲ လေးစားပါတယ်။
အပေါ်က မက်မက်ပြောသလို ပါပဲ
ဆရာဆိုတာ ကတော့ အမြဲတမ်း
တပည့်တွေ ရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုပဲ ကြည့်ကြတာပါ
ပြီးတော့ နာ (၃)နာနဲ့ လည်း တကယ်ကိုပြည့်ဝကြပါတယ်
မြန်မာစာ ဂ၂ မှတ် ရတဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကိုလည်း
ကိုဖိုးစိန် ဘလော့ဂ် စဖတ်မိတဲ့ အချိန်တည်းကတော့
မြန်မာစာ ရမှတ်ကတော့ ဂုဏ်ထူး မှတ်တော့
အခုတော့ ဂုဏ်ထူးမှတ်ကို ဟိုဘက်ကမ်းတောင်
ကျွန်တော် တောင် ၁၀တန်း က မြန်မာစာ အမှတ် ၇၀
မြန်မာစာမှာကော အင်္ဂလိပ်စာမှာပါမရေးတာ။ ဘယ်တော့မှ အမှတ်မများသောဘာသာများ အမှတ် ၂၀ဘိုးအမြဲအလကားထားခဲ့တာ
အမကိုယ်တိုင်အလွတ်ဆရာမ လုပ်ခဲ့ဘူးတော့ ဆရာဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့စေတနာကိုနားလည်ခဲ့လို့ပါ
အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပဲလေနော် ဆရာမကိုတကယ်လို့များ မကျေနပ်တာလေးကျန်သေးရင်တောင် ရောက်တဲ့နေရာကနေ တောင်းပန်လိုက်နော်
ကျေးဇူးတင်တယ်။ ခုလို အရေးတယူ ရှိတဲ့ အတွက်ပါ။
သယ်ရင်းရေတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင်
ဝဲသွားတယ်။ ကိုယ်က ဆရာမတွေကို တော်တော် သံယောဇဉ်ကြီးတာ။
တက်ခ်ထားတဲ့ လူ ၁၈ယောက်မှာ ၂ ယောက်
ကော်မင့် များများရေးသွားတယ်နော် သယ်ရင်း စိတ်ဆိုးနဲ့ အိပ်တော့မယ်။
မနက်ကျရင် စောစောထရအုံးမှာမို့ ။
ချစ်တဲ့ သယ်ရင်း ရီနိူ
ဂုဏ်ထူးဦးဖိုးစိန်အတွက် အပြတ်အသတ် ဂုဏ်ယူပါတယ်...
ဆရာမကိုတော့ စိတ်မခုပါနဲ့ ကိုယ့်လူရာ...
သူမှာလဲ ဖိုးစိန်ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာရှိပါတယ်...
ဖိုးစိန်ကို အသေအလဲ အရှင်မလဲ ချစ်တဲ့ ချစ်ကိုကြီး
သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာမက ကျေးဇူးတင်သင့် တာပါပဲ သွေးအေးသွားတဲ့အခါပြောတာပါ
မြန်မာစာက ဂုဏ်ထူးထွက်ဘို့ အခက်ဆုံးပါပဲ...။
27 July 2009 at 20:43
ရှိတယ်နော်။ နာကြင်အောင်ပြောဆိုမှ မခံချင်ဖြစ် ကြိုးစားသွားမယ်ထင်နေတာလေ။ အမှန်တော့ အနည်းနဲ့အများ ကလေးတွေစိတ်ထဲမှာ ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆို သတိမထားလိုက်ကြဘူးနော်။ ကိုဖိုးစိန် တော်တယ်ဗျာ။
ပီးနဲ့ ပြီးး မရေးတတ်သေးဘူးနော်
27 July 2009 at 23:57
ကျနော်လဲ ၁၀တန်းတုန်းက ဂုဏ်ထူး၂ခုပါတယ် ကိုဂျီးရ။ ရူပဗေဒနဲ့ ဇီဝ။ မြန်မာစာကတော့ ၆၉မှတ်တဲ့။ အဟီး။
မွေးနေ့ထပ်တူကျတဲ့သူတွေက အဲ့လိုပဲ တူတတ်ကြလားဗျာ။
28 July 2009 at 03:24
ဆရာမ က စေတနာနှင့် ပြောတာနေမှာပါ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်တော့မနာသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကိုဖိုးစိန်က မြန်မာစာ ၈၂ မှတ်ကြီးတောင်ရတယ်။ တော်လိုက်တာ။
မောင်လေး ပိုစ့်လေးကို ဖတ်သွားတယ်နော်။ မိမိပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေဟာ တစ်ဘက်သားကို ဒီလိုစိတ်ဒဏ်ရာ ရစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သာမန်လူတစ်ယောက်ထက် ဆရာ ဆိုတဲ့ သူတွေက ပိုပြီး သတိထားနားလည်ရမယ်။ မောင်လေးရဲ ဇွဲကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။
တော်လိုက်တဲ. ကဖိုးစိန်ပါလား vista လောက်နီးနီးပဲနော် ဒို.များလည်းမြန်မာစာဂုဏ်ထူးပါပါတယ်ကွ ၇၆ မှတ်နဲ. ဟိဟိ ဘုရားစူးဂုဏ်ထူးလေ ..ကားကြိတ်ထားတဲ. ပဲပင်ပေါက်အထုတ် ကို လူ၁၀ ယောက်လောက်ထပ်နင်းထားတဲ.လက်ရေးနဲ.ဆိုတော.လည်း.........
ဘ၀ပါ ပြောင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ရောက်လာတာပါ။
ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကိုယ်တိုင်က ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပညာကို နားမလည်၊ မရင့်ကျက်တော့ သူတို့လဲ နားလည်သလို ကောင်းမယ် ထင်တာတွေ လုပ်နေကြရတယ်လို့ ထင်တာပဲ။
ဒီအတွေ့အကြုံလေးကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အနေနဲ့ ဆိုရင် ဘယ်လို ရေးမလဲ?